DC matetika fiovam-po onja paompy
Voalohany, ny toetra 1) Ny vokatra telo fomba: foana amin'izao fotoana izao hafainganam-pandeha fitsipika fomba, onja famolavolana fomba, mamahana fomba, DC40Q ambony indrindra ny rano Boky 2000L / H, DC52Q ambony indrindra ny rano Boky 5000L / H, DC55Q ambony indrindra ny rano Boky 8000L / H, DC65Q Boky ambony indrindra ny rano 12000L / H, fahefana Multiple Gears ...
Wave paompy sy ny submersible paompy anjara
Wave paompy sy ny submersible paompy dia ankapobeny ny zavatra, no tafiditra ny submersible paompy, nefa ao amin'ny fampiasana ny anjara asa samy hafa, ny fampiasana ny fomba isan-karazany. Ny anjara asan'ny ahevaheva paompy: anjara iray: Wave paompy no be mpampiasa amin'ny ankapobeny ao amin'ny trondro goavana sakafo, toy ny hoe: dragona, boloky, Koi, vola tsara vintana, Ma ...
Kiritika-submersible paompy Fomba Iarovana 8 hevitra
ny mpitantana ny 18-10-08
Miniature submersible paompy no mampiavaka ny kely sy maivana, dia tsara mpanampy ho an'ny fisotroan tanim-pambolena sy ny toeram-pambolena ny fiainana ny rano. Mba hahazoana antoka ny fiainana ara-dalàna ny paompy kely foana submersible fampisehoana milamina sy tsy ampiasaina mandritra ny loza, niteraka fatiantoka, dia tokony handoa ny fampiasana ny ...
Ny fitsipiky ny ara-nofo ny paompy
Ny fitsipika ara-nofo ny paompy Power zavamaniry sy fitaovana na milina hydraulic voajanahary izay mampiasa hery mba hanangana ny rano avy any ambany ho any ambony. Nampiasaina be teo amin'ny toeram-pambolena fampidiran-drano, drainage sy ny fambolena, biby husbandry, orinasa sy ny orinasa fitrandrahana, tanàn-dehibe rano, drainage sy ny sisa. Paompy ...
Ny tombontsoa ny rivotra ny rano heaters mitempo manosika ny
Air ny rano paompy heater tombony: 1.running vidiny ambany dia ambany: niavaka angovo-famonjena, fotoana fohy payback, ny vokatra raha oharina amin'ny vokatra mahazatra afaka mamonjy ny 70% ny hery; sy ny gazy, jiro sy herinaratra mpanampy fanafanana rano heater masoandro raha oharina amin'ny vola isan-taona ambany indrindra, masoandro de ...
Kiritika brushless DC fahalalana mifandraika paompy
Voalohany, inona no brushless DC paompy? Ny brushless DC rano paompy mampiasa ny fitsipiky ny andriamby maharitra brushless DC maotera, ary ny impeller dia nanampy ny Fanodina, ary ny lavaka rafitra dia natao mba hahatonga ny rano centrifugally hetsika. Koa satria tsy misy karbonina borosy friction, tsy misy pitik'afo dia Ge ...
Ny anjara asan'ny paompy ahevaheva sy ny submersible paompy
Wave paompy sy ny submersible paompy no ankapobeny zavatra iray karazana, izy ireo rehetra tao amin'ny sokajy submersible paompy, saingy samy hafa izy ireo vokany eo amin'ny fampiasana sy ny fomba samy hafa ny fampiasana. Ny andraikitry ny ahevaheva paompy: Anjara asa iray: ahevaheva fanaovana paompy no ampiasaina amin'ny ankapobeny goavana fiompiana trondro, toy ny hoe: ...
Miniature brushless DC soa aman-tsara fampiasana hevitra
Ny endri-javatra lehibe indrindra ny paompy rano kely dia DC fa voalamina tsara sy mazava, mora ny hametraka, feo ambany, ambany heriny sy ny fahombiazan'ny ambony. Nampiasaina be teo amin'ny zaridaina saha, zaridaina loharano kely, midadasika fitarihan-drano, aquaculture, fitaovana kely tokantrano fampiharana, sns, nandrakotra ...
Ara-batana fitsipiky ny paompy
Ara-batana fitsipiky ny paompy: Power fitaovana sy ny fampitana na hydro-milina izay mampiasa angovo voajanahary mba hanangana ny rano avy any ambany ho any ambony. Nampiasaina be teo amin'ny toeram-pambolena fampidiran-drano, drainage sy ny fambolena, biby husbandry, orinasa sy ny orinasa fitrandrahana, tanàn-dehibe rano, ary ny anankiray kosa drainage ...
Tombony ny rivotra angovo rano paompy
Tombony ny rivotra angovo heater mitempo manosika ny rano: 1, Low fandidiana vidim: miavaka hery vokatry ny fahavaratra sy ny fe-potoana fohy miverina fampiasam-bola, vokatra io dia afaka hamonjy ny 70% angovo raha oharina amin'ny mahazatra ny vokatra; raha oharina amin'ny mandatsa-dranomaso, ary ny jiro elektrika mpanampy fanafanana rano heaters masoandro, ny ambany indrindra ...
Ahoana ny fampiasana ny Aquarium paompy onja? inona no vokany?
Ny onja paompy dia afaka tena azo ampiasaina toy izao! Fotsiny manamelo-tena noho mahalala tara loatra! Ahoana ny fampiasana ny onja paompy? Ahoana no apetraka ny toerana? Ahoana no ahafahako hamono tsara kokoa? Indro, misy fanontaniana, inona no anjara toeran'ny paompy ny onja? Sa inona no tena andraikitry ny onja paompy? Amin'izao fotoana izao, indrindra ny aqu ...